Free Download Windows 10 DVD Onye kere: Ọkụ DVD, Mee ngosi mmịfe
> Resource> DVD> Windows 10 DVD Onye kere: Easily Mee ngosi mmịfe, Ọkụ DVD na Windows 10
Windows 10 DVD Onye kere: Easily Mee ngosi mmịfe, Ọkụ DVD na Windows 10
Mgbe upgrading gị usoro Windows 10, ị ga-ahụ na ọ bụ enweghị ike ọkụ DVD fim na gị onwe gị vidiyo ka ọ na-eji na-na Ohere 7. The kpatara ya bụ na Microsoft wepụrụ DVD Onye kere si Windows 10. Nke a bụ n'ezie na-akụda mmụọ, na-eme ọrụ gị igba obere oru oma. Achọ a Windows DVD onye na Windows 10, na ị bụ nri ebe a! Anyị na-chọta a kasị mma Windows 10 DVD onye, ​​nke na-ahapụ gị mfe ike DVD na-eme ka mara mma ngosi mmịfe na Windows 10.
Wondershare DVD Onye kere bụ site ugbu a kasị mma Windows 10 DVD onye. Na nke a software, ị nwere ike ọkụ video na Windows 10 si fọrọ nke nta ọ bụla video format, dị ka AVI, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, na wdg E wezụga, ị pụrụ ime ka ndị mara mma e mere DVD ngosi mmịfe na music na mmetụta. Ọzọkwa, ndị na-ewu na-nchịkọta akụkọ na-ahapụ gị hazie videos na foto n'ihu na-ere ọkụ. Ọ bụ nnọọ oké ngwa maka eke DVD na Windows 10.
Olee otú ọkụ DVD na nke a Windows 10 DVD Onye kere
Wondershare DVD Onye kere ike ka ị na ọkụ DVD na Windows 10 dị ka i mere tupu na Windows DVD Onye kere on Windows 7. Biko gụọ mkpirikpi nkuzi n'okpuru.
1 mbubata gị video ma ọ bụ foto
Mgbe wụnye na nbudata na software, pịa bọtịnụ "Ọkụ" na mgbe nanị ịdọrọ na dobe faịlụ gị n'ime nke a Windows 10 DVD kere ya. Ma ọ bụ i nwere ike pịa "Import" bọtịnụ na n'etiti interface. Ka ịgbakwunye ndị faịlụ n'ime ngwa, biko dị nnọọ agbaso otu usoro.
2 edezi Video na nke a Windows 10 DVD Onye kere (Nhọrọ)
Biko dị nnọọ pịa a edit icon (dị ka a pensụl) na gị video ka gbapụta ndị video edezi window. Ị nwere ike akuku na bugharia, welie ewepụtụ gị video ma tinye watermark ma ọ bụ sobtaitel ka video. Dị pịa onye ọ bụla na akara ngosi (Eme, Kpaa, Watermark, Ndepụta Okwu) iji hazie gị video.
3 Hazie DVD menu Template
Pịa "Change Template" taabụ na nri nke interface. Ị nwere ike ịhọrọ gị họọrọ Template na Windows 10 DVD Onye kere. I nwekwara ike ịgbakwunye ndabere ma ọ bụ tinye ederede gị DVD.
4 Preview na ọkụ gị DVD na Windows 10
Mgbe ịhazi gị DVD, biko pịa "Preview" akara ka ịhụchalụ ya. Ọ bụrụ na ị ọdịnaya na-arụ ọrụ gị, dị nnọọ gaa n'ihu. Pịa "Ọkụ" akara ngosi na-amalite na-apa ọkụ. Tupu mgbe ahụ, biko setịpụrụ ma ọ bụ ọkụ na-a DVD disk ma ọ bụ onye ISO faịlụ. Mgbe ahụ ị pụrụ ele gị DVD on TV na ndị enyi gị ugbu a!
Top 10 Best DVD eso maka Windows
Free DVD NchNhr Templates
Top 10 Disc-ere Ọkụ Software maka Windows
Olee otú Play DVD on OS X Mavericks
Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ MOV? Ngwọta
Nweta Best Software Dị ka Nero
Gịnị bụ Blu-ray codecs na Olee Play Blu-ray Movies?
Olee otú Ọkụ DVD si Vuze na Vuze ka DVD burner (Windows 10 gụnyere)